Apple inogona kutora Spotify chirimo chino muUnited States | Ndinobva mac
Apple inogona kutora Spotify chirimo chino muUS
Kunyangwe paine kusanganisa kweApple Music munzvimbo yese yeApple ecosystem, nhasi vashandisi vazhinji vanoenderera mberi nekuvimba Spotify seyavanofarira kushambadzira mumhanzi sevhisi, vasina kumbofunga nezvayo. chinja kune Apple's yekumhanyisa mimhanzi sevhisi.
Maererano ne nhamba dzichangoburwa dzepamutemo dzakaziviswa nekambani imwe neimwe, Spotify ine mamirioni 70 vanyoreri, nepo Apple Music ichisvika makumi matatu. Asi zvinoita sekunge mumba meApple, United States, Apple's music streaming service inogona kupfuura Spotify muhuwandu hwevashandisi iri rinouya zhizha. Izvo zvisingakwanise kunyaradzwa, imhaka yekuti haudi.
Sekureva kweThe Wall Street Journal, ichitsanangura zvinyorwa muindasitiri yemimhanzi, muUnited States Apple iri kuwana vanyori vazhinji muUnited States kupfuura Spotify. Apple Music iri kuve nekuwedzera kwemwedzi wega kwe5% ukuwo kukura kweSpotify kuri 2%, zviverengero zvekuti kana zvikachengetedzwa kusvika muzhizha, zvinobvumidza Apple Music inodarika anotungamira epasi rese mimhanzi kuruboshwe.
Pamusoro pezvo, sekutaura, parizvino, Apple Music yatove nevanyoreri vanosvika mamirioni makumi matatu neshanu (nhamba idzo Apple isina kusimbisa zviri pamutemo), Jimmy Iovine akazivisa Nyamavhuvhu apfuura.
Sezvandambotaura pakutanga kwechinyorwa chino, avo vasingazvinyaradze imhaka yekuti havadi. Ose Apple neSpotify havana, uye ndinoti HAPANA, vakashuma pamusoro pehuwandu hwevanyoreri pasireseHongu, panguva ino ndinopokana zvikuru kuti vachadaro. Masosi eThe Wall Street Journal, ane hukama nenyika yekurekodha, haazive kusvika pamwero wavanogona kuziva iwo maitiro evashandisi neyakaerera sevhisi sevhisi kana imwe. Asi zvakadaro, kana pasina nhau ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inogona kutora Spotify chirimo chino muUS
Edza nhasi, kana Mac yako ine 32-bit application